Su'aal: Waa Maxay Faa'iidooyinka Geedka Xildiidka?
Author Topic: Su'aal: Waa Maxay Faa'iidooyinka Geedka Xildiidka? (Read 41513 times)
« on: February 15, 2012, 12:16:27 AM »
Dhakhtar, waxaan rabaa in aad faah faahin naga siisid geedka Xil-diidka (Assu fortida), geedkaan ma leeyahay faa'iido caafimaad haddii laga reebo in lagu daaweeyo cudurka Xiiqda? Ma dhab baa in uu daawo u yahay ragga hoos u dhaca galmada qaba? Ma run baa in uu haweenka uurka leh iyo dhalaanka yar yar khatar u yahay ama ku shaashoonayaan haddii ay mar uriyaan? Ma sax baa-se in uu laayo gooryaanada caloosha ku jira iyo sidoo kale in uu eriyo masaska? (haddii la dhigo meel uu mas joogo ama lagu shido, waxaa la sheegaa in uu masku halkaas ka qaxayo) Dhakhtar adigoo aad u mahadsan fadlan noo soo gudbi macluumaadkiisa iyo qaabka loo isticmaalo.
Re: Su'aal: Waa Maxay Faa'iidooyinka Geedka Xildiidka?
« Reply #1 on: March 10, 2012, 02:23:13 PM »
Xildiidka waa geed ka mid ah geedo daaweedka inkastoo u baahan yahay taxaddar badan isticmaalkiisa maxaa yeelay qofka wuu sumoobi karaa haddii uu qaato isagoo aanan aqoon u lahayn.
Xildiidka waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin qaarka aad soo sheegtay sida: Xiiq-dheerta, Gooryaanada, Calool socodsiinta, Dibbirada, Xanuun baabi'inta, Sonkorowga iyo cudurro kalaba.
Xildiidka lama siiyo ilmaha ka yar 2 sano maxaa yeelay way ku sumoobi karaa, oo dhiig yari ayay ku ridaa oo hemoglobinta ayuu weeraraa oo hoos u dhigaa, islaamaha uurka lehne lama siiyo oo caruurta ayuu ka soo ridaa.
Xildiidka waa xabag geed oo ur badan oo aad u qaraar, marka sidaa darteed bahallada ma jeclo oo way ka fogaadaan sida masaska iyo wixii la mid ah.
Xildiidka waxaa kaloo dadka qaar u adeegsadaan bukhuur ahaan iyagoo aamisan in jinniyada ay ka cararaan?!!
Midda ku saabsan kacsiga iyo sare u qaadista hamiga, taasi la ma hubo laakiin waxaa la sheegaa in hindida laga soo wariyay in ay u isticmaali jireen arrintaas.
Haddii aad su'aalo caafimaad qabta iigu soo dir qeybta su'aalaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
Views: 54316 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 55182 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 50672 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 35639 May 06, 2018, 01:17:25 PM